နယ်2သိန်းဖုန်းရန်ကုန်မှာသုံးလိုမ၇ဘူးတဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နယ်2သိန်းဖုန်းရန်ကုန်မှာသုံးလိုမ၇ဘူးတဲ့
Posted by k19 on Jun 13, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
နယိက၀ယ်လာတဲ2သိန်းဖုန်းကရန်ကုန်မှာသုံးမရဖြစ်နေတယ်လိုင်းမမိတာမဟုတ်ဘူးတမင်ပိတ်ထားတာလိုပြောကျတယ်။ ရန်ကုန် ကနောက်မှချရောင်တဲဖုန်းကျတနိုင်ှု့လုံးသုံးလို၇တယ်တဲ့..မတရားဘူးနော်.. နယ်ကလူတွေကိုမလေးစားရာကျပါတယ်.. ၇န်ကုန်ကလူတွေမှာသိတယ်တတ်တယ်ထင်ပြီးကြောက်နေကျတာလား ASIA MEGA LINKကချရောင်ပေးတဲမန်းလေးဘက်ကဖုန်းတွေကရန်ကုန်မှာအကုန်သုံးလိုမ၇ချသေးဘူးတဲ …ဖြေ၇ှင်းပေးကျပါ
k 19 has written2post in this Website..
View all posts by k19 →
K19 ရေ….နယ်မှာဝယ်လာတဲ့ဖုန်းကို ကဒ်ချိုးပြီးချင်းချင်း ရန်ကုန်မှာသုံးတာလား…ဒါဆိုသုံးမရပါဘူး။ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို ဝယ်လာတဲ့နယ်ရဲ့ Server မှာ Register လုပ်ပေးရပါတယ်။ အလွယ်ပြောရင်တော့ အကိုဝယ်လာတဲ့နယ်မှာ ကဒ်ကိုချိုးပြီးတော့ အဲ့ဒိဖုန်းကနေ အခြားသောဖုန်းတစ်လုံးကို 1 Call တော့ခေါ်လိုက်ပါ။ ခေါ်လို့ပြီးသွားရင် ရန်ကုန်မှမဟုတ်ဘူး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖုန်းကွန်ရက်ထဲမှာ ကြိုက်တဲ့နေရာကိုသယ်ဆောင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။
ဥပမာ။ ။ ကိုကလည်းဝယ်ပြီးသွားပြီ၊ ကဒ်မချိုးသေးဘဲနဲ့ ရန်ကုန်ယူလာမိ၊ ဝယ်ခဲ့တာကလည်း ပြန်သွားရမှာအရမ်းဝေးတဲ့ နေရာမျိုးဖြစ်နေရင်တော့ ဆက်သွယ်ရေးကိုသွားပြီး ဖြေရှင်းခိုင်းရင် နေ့ချင်းရမယ်လို့ကြေငြာထားပါတယ်။
အင်း Davit ပြောတာမှန်တယ် ကျွန်တော်လဲမိတ်ဆွေတယောက်အဲလိုဖြစ်တာကြုံဖူးတယ်
အဲဒါနဲ့ နယ်မှပြန်မှတ်ပုံတင်ပြီးမှ ခေါ်တာရသွားတယ်
မယုံ၇င် နံပါတ်ပါပေးမယ် အဲလောက်သေချာတယ်
ကျွန်တော် အဲ့ဒိအကြောင်းလေးတွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီး Post တစ်ခုရေးခဲ့ဖူးပါတယ်….ဟောင်းသွားတော့ ကိုK19 မသိလိုက်တာနဲ့တူပါတယ်….
တချို့ ဖုန်းတွေများ အလိုလိုပွင့်နေတာလဲရှိနေတယ်ဗျ။မူရင်း baseမှာ ခေါ်ဆိုမှုပြုခဲ့မှ
တခြားနေရာတွေ ယူသွားလို့ ရပါတယ် လို့ ကိုဗစ်ပြောထားသလိုပါဘဲ
နယ်ကဒ်တွေကို ရန်ကုန်မှာဝယ်တော.လဲ ချက်ချင်း ပွင်.သား။ ဘာသဘောလဲတော. မသိဘူး။ ၄၂၅၀ နဲ.စတဲ. ဖုန်းကို ရတနာပုံတယ်လီပို.(စ်)မှာ internet သွားလျှောက်တော.မှ နယ်ဖုန်းမှန်း သိခဲ.တော.တယ်။ နယ်ဖုန်းတွေကို မြန်မာ. ဆက်သွယ်ရေးမှာပဲ လျှောက်ရတယ်လို. ပြောပါတယ်။
အော် ဒါလေးတောင် မသိဘူးလားကွယ်။
အသိတစ်ယောက်ကတော့ နယ်မှာ သုံးနေတဲ့ဖုံးကို ယူလာတာ ရန်ကုန်လဲရောက်ရော ခေါ်မရတော့ဘူးလို့ ပြောတယ်။
အဲလိုဖြစ်ရင်ကော ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။
နယ်မှာ1လခွဲလောက်သုံးလာခဲပြီးသားဗျ ၇န်ကုန်မြုင့်ပြင်အမြန်လမ်းမပေါ်10မိုင်လောက်၇မှာလိုင်ပြန်သုံးလိုရတာဗျ အနော်စမ်းပြီးပြီး
အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဆက်သွယ်ရေးကိုသာပြေးပေတော့ အကိုရေ………
ဒါဂဒေါ့ လွယ်ပါဒယ်…..လက်ချိဂိုရောင်းပီး..ဆီးတီးအမ်အေ ဂလေးပြောင်းကိုင်
အော် အဲဒီလို တစ်ခါတည်း ရှင်းအောင် ရေးပေါ့ကိုကို ရယ်။
ဂျာနယ်ထဲမှာ ရေးထားတာ ဖတ်ဘူးထားလို့ ၀င်ပွားတာပါ။
အဲဒါတော့ ကျွန်တော် လည်း မဖြေတတ်တော့ဘူးဗျို့။
အခုနယ်က ၂သိန်းဖုန်းတွေ နယ်ကျော်သုံးချင်ရင် ဆက်သွယ်ရေးကိုအကြောင်းကြားရတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ဖုန်းဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုလည်းအကြောင်းကြားရတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်လို့မှ အကြောင်းမထူးရင် CDMA လေးဝယ်ကိုင်လိုက်ပါကွယ် (ပို့စ်ထဲမှာ မပြောဘဲ ထိန်ချန်ထားတာရှိသေးရင်တော့ ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုယ်ဘဲနော်)
စိတ်ညစ်ပါတယ်…အဟင့်.. : ‘(